Shiinaha Soosaarida Mashiinka Mashiinka Yar iyo Warshad | Youte Makiinado
Mashiinka ay soo saarto warshaddeena waxaa si gaar ah loogu adeegsadaa soo saarida gariiradda yaryar. Waxaa wada matoor, waxaana jira sanduuq kontorool oo lagu gelinayo dherer la siiyay. Ka dib markaad riixdo badhanka badhanka, wuxuu si otomaatig ah u istaagi doonaa marka dhererka la cayimay la gaaro. Qaylada shaqada ee mashiinkan aad ayey u hooseysaa. Moodooyinka kala duwan ee mashiinadan taxanaha ah ayaa lagu soo saari karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha. Mashiinka wuxuu leeyahay astaamaha naqshad macquul ah, qaab dhismeed fudud, hawlgal xasilloon, waxqabad wanaagsan, waxtarka sare iyo dayactirka habboon.
Sharaxaad Mashiinka Tuuqa Yar
Magaca: Silig dhow-xirmo silig yar oo la duubay
Isticmaala: loo isticmaalo xarigga siligga dhismaha, xirashada beerta, dhererka, dhexroor duudduuban, baakadaha ayaa la soo saari karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha, ku habboon, dhakhso leh oo qurux badan.
Fiilo yar-yar oo la duubay waxay u qaybsan tahay silig yar oo la duubay, PVC silig yar oo la duubay, silig yar oo dabacsan oo annealed ah, bir bir ah oo bir ah oo aan daxalaneyn, silig yar oo duuban oo naxaas ah, silig naxaas ah oo silig yar oo duuban,
Caddaymaha: Dhexroor gudaha 4 cm \_ 5 cm \_ 6 cm \_ 10 cm qeexitaano kale ayaa loo habeyn karaa iyadoo loo eegayo baahida macaamiisha.
Dhexroor silig: 0.6-4mm
Waxyaabaha: silig madow, pvc, silig galvanized.
Xarigga siligga yar ee la soo saaray ayaa loo adeegsadaa silig caawimaad dhisme, culeyskiisu waa qiyaastii 1-1.5 kg, shaqaaluhuna wuu ku qaadi karaa jirka si loogu isticmaalo si fudud. Dhexroorka gudaha waa 4.5-5 cm, dhexroorka banaanka waa 11-12 cm, dhumucdiisuna waa 4 dhibcood oo shaqo ah. Waxay sidoo kale noqon kartaa iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha Soo saarista, muuqaalka waxaa lagu daaweeyaa ka hortagga miridhku si looga hortago miridhku.
Hore: Mashiinka Net Net
Mashiinka Sawirka Fiilooyinka